Budata Beast Battle Simulator maka Windows
Budata Beast Battle Simulator
Budata Beast Battle Simulator,
Enwere ike ịkọwa Simulator Beast Battle dị ka egwuregwu ọgụ anụ mmiri dabere na physics.
Anyị na -ahazi agha netiti dinosaurs na anụ ọhịa na Beast Battle Simulator, egwuregwu ịme anwansị nke na -enye ndị egwuregwu ohere ịlụ ọgụ nzuzu. Nọgụ ndị a ebe mgbako gbasara physics dị mma, anyị nwere ike ikpebi ọnụọgụ anụmanụ na dinosaurs anyị ga -etinye námá. Enwekwara ụdị egwuregwu dị iche iche na egwuregwu ahụ. Na ọnọdụ sandbox, ị nwere ike ikpebi ọnụọgụ dinosaurs na anụmanụ, ọnụọgụ mmebi na ahụike, wee tinye nnukwu anụ mmiri ị mepụtara nọgbọ agha. I nwekwara ike igwu egwuregwu bọọlụ na Beast Battle Simulator. Na ọnọdụ a, a na -etinye otu nnukwu anụ negwuregwu bọọlụ ma enwere ike ịme egwuregwu site na ọgụ.
Beast Battle Simulator na -enyekwa anyị ohere iji ngwa agha kwadoo nnukwu anụ mmiri anyị. Ị nwere ike kwadebe ọgụ gị T-Rex na miniguns, akwa mgbọ ogbunigwe ma ọ bụ ndị na-enwu ọkụ. Ihe karịrị ụdị dinosaurs na anụmanụ iri atọ, nhọrọ ngwa ọgụ dị iche iche na ụdị ọgụ na -ezukọta na egwuregwu ahụ. Ndị na -egwu egwuregwu nwere ike ịchịkwa dinosaur ma ọ bụ anụmanụ ọ bụla ha chọrọ noge agha.
Obere usoro chọrọ nke Beast Battle Simulator bụ ndị a:
- Kaadị eserese eserese nke GeForce 5
Beast Battle Simulator Ụdịdị
Mmepụta: DOG HOGGLER